Peru karịa okpukpu abụọ Covid nwụrụ mgbe nyochachara
By bryanekobe	 On June 1, 2021
Peru nwere ihe karịrị okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ na Covid na-esote ule, na-eme ka ọ bụrụ mba nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ọnụ ọgụgụ mmadụ nwụrụ na ụwa, dị ka data sitere na Mahadum Johns Hopkins si kwuo.
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ gọọmentị nwụrụ ugbu a karịrị 180, karịa 000.
Mịnịsta Ala Violeta Bermudez gwara ndị nta akụkọ na ọnụ ọgụgụ ha abawanyela na ndụmọdụ ndị ọkachamara na Peruvian na mba ụwa.
Nke a kwekọrọ na ọnụ ọgụgụ a na-akpọ ọnụ ọgụgụ ọnwụ.
Ọnwụ ọnwụ bụ ọnụọgụ ọnụọgụ nke ndị mmadụ na-anwụ karịa ihe mmadụ nwere ike ịtụ anya na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Mazị Bermudez kwuru, "Anyị kwenyere na ọ bụ ọrụ dịịrị anyị ime ka ozi a dị ọhụrụ maka ọhaneze."
Peru bụ otu n'ime mba kachasị emetụta na Latin America, na-ebute usoro ahụike karịrị akarị na enweghị tankị ikuku oxygen.
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ Covid nwụrụ ugbu a bụ 180, nnukwu mmụba site na ọnụ ọgụgụ gọọmentị gara aga nke 764.
N'iji ya tụnyere, ndị agbata obi Colombia edeela ọnwụ 88 na Bolivia ekwuola ihe karịrị 282, ebe Brazil nwere otu ọnụ ọgụgụ kachasị elu n'ụwa na ihe karịrị mmadụ 14.
Emmanuel Macron na-eme mkpebi maka ndị mba ọzọ nọ n'ọnọdụ ...
Mana Peru nwere ugbua ọnụ ọgụgụ kacha elu n'ụwa n'ihi ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya, dị ka data Johns Hopkins si kwuo .
Hungary na mbụ nwere ọnụ ọgụgụ kacha njọ nke ọnwụ kwa mmadụ, n'ihe dị ka 300 n'ime 100 mmadụ. Taa, Peru nwere ihe karịrị 000 nwụrụ site na Covid n'ime 500 ndị bi na ya.
Ezigbo ihe osise na-apụta
Ndị Peruvians chere na ha anaghị enweta ezigbo foto ọnọdụ ọjọọ coronavirus nke gọọmentị.
Ọnụ ọgụgụ edegharịrị maka ọnwụ ndị metụtara Covid-19 na-egosi na ha ziri ezi inwe obi abụọ. N'ezie, gọọmentị ekwetala na ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ ahụ karịrị ọnụọgụ abụọ nke mbụ.
Otu ndị ọkachamara na-ahụ maka ndị ọrụ gọọmentị, nke e hiwere iji nyochaa data sitere na Peru, wepụtara ọnụ ọgụgụ ndị emezigharịrị mgbe ha guzobere njirisi sara mbara nke edere ọnwụ site na coronavirus.
Ugbu a ebubatala nkọwa dị warawara, ọnụọgụ ndị mmadụ na-anwụ na mba dị elu karịa nke Brazil.
Onu ogugu di otua na ihe omuma ndi ozo site na ulo ogwu na ulo oru nlebara anya na mba ahu ya na onyonyo nke ebe a na-eli ozu na-agbasi ike inweta ohere maka otutu olili kwa ubochi.
Ka ọ dị ugbu a, usoro ịgba ọgwụ mgbochi ahụ adịla nwayọ ma nwee nnukwu nsogbu n'ofe South America.
Ngwa ndị a ga - enyere gị aka ịmata ihe dị na ngwaahịa kachasị amasị gị
Isiokwu a pụtara na mbụ: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57307861
A boro Denmark ebubo na ọ nyere onye nledo US aka na Merkel
Emmanuel Macron na-eme mkpebi maka ndị ọbịa na-akwadoghị iwu mgbe ...